China FOTON U9 / U10 fekitori uye vagadziri | Foton
Murairidzi we Foton U9 / U10 ane chokwadi chekuita fungidziro parwendo chero rupi zvarwo nehunyanzvi hwekugadzira zvinhu, ichivimbisa huwandu hwakawanda hwekuwanikwa kwemota uye mashandisirwo pamwe nekuita zvakanaka uye zvine simba.
Kunopindirana Dimension 9380 * 2500 * 3400
Kurambidza Kurema 9.8T
Kugara Kugona 39 + 1 + 1/41 + 1 + 1
Luagge Chikamu 4.5m3
Chitarisiko nekuzvivimba. Iko kutaridzika kunoratidzira yeEuropean avant-garde inogadzira mukuenderana kwakaringana neyekumabvazuva aesthetics. Yakasimba uye ine fashoni, yakasimba kuenzanisa modelling uye zviyero zvakaenzana inoona murairidzi achiunza kubata kwekuzvivimba munzira.
Wing-yakaumbwa Yakasarudzika Electroplating Furemu
Kusanganiswa LED Muswe Mwenje
Cummins ISB injini,
Euro VI kuburitsa chiyero,
kukurumidza kubva zero kusvika 90 mph mumasekondi makumi maviri nemasere.
Akangwara kutonhora system
Yakashongedzerwa nehunyanzvi hwepakati patekiniki - otomatiki tembiricha-kudzora kutonhora system ine 7 emagetsi mafeni.
Kunonyanyisa gradability inosvika makumi matatu.
Kunoshamisa kuita pamugwagwa wakamanikana
Minimum wekutendeuka nharaunda inosvika 9.8m.
iTink, inotungamira IOV mupi, inogadzira yakangwara manejimendi sisitimu inosanganisa mashandiro, manejimendi, uye sevhisi yekuita manejimendi manejimendi nyore.GPS mota chaiyo-nguva yekutarisa inogona kuwana ruzivo rwemota yekuenderera mberi nekumhanya kwemamiriro ekuongorora, senge chinzvimbo chemota, mamiriro ekushandisa mafuta, kumhanya, kumhanyisa, nzira, kumhanya track